वर्षा-वर्षाको सम्बन्ध: मनबाट कि देखावटी ? – Fewa Times
निर्मला हत्या काण्ड : १० महिना पुरा रनभुल्लमा प्रहरी-पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्रीको निधन-सात करोड ६८ लाख नक्कली भारूसहित युनुसको समूह पक्राउ-दाइजोमा मोटरसाइकल र सुनको सिक्री नपाएको भन्दै बेहुली नलिई फर्किए बेहुला-सरिता हत्या प्रकरण : ५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा-संघीयता पंगु बनाउँदै सरकार र संसद !-टहरोमा आगलागी हुँदा एकै परिवारका तीन जनाको ज्यान गयो-बिहेको ८ दिन अघि गरे बेहुलाले आत्महत्या-निर्मलाको आमाले लिइन् १८ लाख राहतः ‘दुई छोरीको भविष्य निर्माणमा खर्च गर्छु’-पाँचथर हत्याकाण्ड : पत्याउनै गाह्रो, सपना जस्तो
वर्षा-वर्षाको सम्बन्ध: मनबाट कि देखावटी ?
प्रकाशित मिति: May 12, 2019 9:45 pm
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा वर्षा राउत र वर्षा सिवाकोटीको चर्चचा निकै हुने गर्छ । उनीहरुलाई एक-अर्काको दुश्मन नै मानिन्छ ।
यस्तैमा विभिन्न फण्डा बनाउन सिपालु नायिका वर्षा सिवाकोटी हालै फेसबुकमा एक स्टाटस पोस्ट गरिन् । त्यहाँ उनले वर्षा राउतलाई सम्बोधन गर्दै आफूहरु दुश्न भएको हल्ला फिजाएको कुरा उल्लेख गरिन् । उनले त्यहाँ वर्षा र आफू एकदमै मिल्ने साथीहरु भएको बताएकी छिन् ।
उनले स्टाटसमा लेखेकी छिन्, ‘डिअर वर्षा राउत खै कसले भनेछ हामी दुश्मन अरे । हामीले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्न सकेनौँ अरे । हामी प्रतिस्पर्धी पक्कै हौँला, एकै क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ । त्यसलाई अस्विकार न तिमीले गर्न सक्छौ न मैले । एकै ओछ्यानमा सुतेपछि खुट्टा लाग्नु त स्वाभाविक नै हो नी होइन र ? हिजो एकै फ्रेममा अटाएका हामी आज एक अर्काको दुस्मन बनाइएका छौँ । के साच्चै तिमी मेरो र म तिम्रो दुश्मन हौँ र ? हामी बिचमा कहिल्लै केही कुरामा असमझदारी आएका छन् र ? न तिमीले मेरो नाममा न मैले तिम्रो नाममा कहिल्लै कसैसामु सङ्कुचित भावना राखेर कुरा काट्दै हिँडेका छौँ । तर पनि हामी एक अर्काका दुश्मन कसरी बन्यौँ ? एकै परिवारका दुई सदस्य हामी आखिर यो बजारमा भनिएको जस्तै दुश्मनी बोकेर बसेका छौँ र ? तिमीले तिम्रो कर्म गरिरहेकी छौ मैले मेरो कर्म । कर्म फरक फरक गरे पनि धर्म त हाम्रो उही ‘कलाकारिता’ नै हो नी होइन र ? भोगाई र मर्म तिम्रो र मेरो उस्तै त छ नि छैन र ? हामीले एकै ब्यानरबाट चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेक्यौँ । हिजो म्युजिक भिडियो अभिनयमा छँदा पनि हाम्रो सुरुवात खासै फरक समयमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । दिन फरक भए होला समय पक्कै फरक थिएन । फेरी त्यही समयमा फर्कौँ जहाँ हामी एकै फ्रेममा रमाएका थियौँ । यो भन्दै गर्दा फेरी केही दिनमा फेरी सुन्न पाइनेछ ‘जेठ ३मा दुई बर्षाको भिडन्त ।’ तर, म भन्छु जेठ ३ गते हाम्रो भिडन्त होइन मिलन हुनेछ हल हलमा । हामी सँगै लाग्दैछौँ । एकै फ्रेममा नदेखिए पनि उही पर्दामा पालो पालो देखिनेछौँ । ‘जात्रै जात्रा’को लागी तिमीलाई शुभकामना ।‘
वर्षाको यो स्टाटसमा नायिका वर्षा राउतले रिप्लाई गरेकी छिन् । उनले पनि आफूहरु दुश्मन नभएर मित्र भएको लेखिन् । उनले त्यहाँ लेखिन, ‘हल्लो डिअर ! त्यै त है हामीलाई थाहा नै नपाई एक अर्काको दुश्मनको बिल्ला भिराएछन् । फुलको आखामा फूलै संसार, मेरो केहि भन्नु छैन । मुख्य कुरा हामीले एक अर्कालाई कसरी लिन्छौ भन्ने हो । हामी आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुँदा कुराकानी भेटघाट पातलो भएको पक्कै हो । यसको मतलब दुश्मन कुन कोण बाट भयौ, भन्नेहरु लाई नै थाहा होला । हामी कलाकार आज एउटासँग भोलि अर्को संग काम गर्न पर्ने हुन्छ । हाम्रो आफ्नो भनेको काम हो । कुन फिल्म कहिले आउने भन्ने हाम्रो कुनै हात हुदैँन । यसमा कुनै हाम्रो गल्ती देख्दिन । म पनि यहि कुरा सोच्दै थिए तिमीले मेरो मनकै कुरा लेख्यौ । तिमीलाई पनि बीर बिक्रम २ को शुभकामना । समग्रमा हामीलाई शुभकामना ! बाकी भेटमा है साथी ।‘
उनीहरुको फेसबुकको यो अन्तरकृयाबाट उनीहरु एक-अर्कामा निकै मिलेका छन् जस्तो लाग्छ । तर, त्यो अवस्था भने हैन् । केही दिन अगाडि वर्षा सिवाकोटीले ‘वीर विक्रम २’कै प्रचारको क्रममा वर्षा राउत आफूले फिल्म छोडेकाले काम पाइरहेको बताएकी थिइन् । उनले पत्रकारको प्रश्नमा वर्षा राउतले आफूलाई धन्यवाद भन्नुपर्ने समेत बोलेकी थिइन् ।
केही दिन अगाडि मात्र वर्षा राउको विषयमा कुरा काटिरहेकी वर्षा सिवाकोटी र वर्षा राउतको मित्रता छ भन्ने कसरी पत्याउन सकिने ?
अझ वर्षा राउत वर्षा सिवाकोटीबाट निकै टाढा रहन चाहान्छिन् । वर्षा राउतको जन्मदिनमा सिवाकोटीले विस गरिन । तर, राउतले भने सिवाकोटीलाई विस पनि गरेकी थिइनन् । उनीहरु दुई धुर्वका तारा जस्तै थिए ।
वर्षा राउतले फेसबुक स्टाटसमा दिएको रिप्लाई पनि जवरजस्ती जस्तै थियो । मनबाट खुसी भएर दिएकी हुन् भन्ने कुरामा शंका नै छ ।
तर, जे होस् बर्षा सिवाकोटीको यो स्टाटसलाई सकारात्मक कदमको रुपमा लिइन्छ । जसमा बर्षाले दिएको प्रतिक्रिया पनि सकरात्मक नै होस् । आशा गरौ, दुई नायिकाको यो सम्बन्ध फेसबुकमा मात्र नभएर व्यवहारिक रुपमा पनि बलियो होस् ।
लक्ष्मी मल्ल र बसन्त थापाको “लोभी आँखा”मा पुष्प खड्का र शिल्पा पोख्रेल
स्वरुप राज आचार्यको “प्रतिज्ञा प्रेमको”
‘मन्द–मन्द’ मा कसिस र नवीन
पुष्कल र मुनाको ‘फाटेको मन’
काठमाडौं – बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको जग्गा सम्बन्धी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको......